बढ्यो आन्तरिक हवाई भाडादर, रु. ९० देखि रु. ४४५ सम्म वृद्धि
काठमाण्डौ। हवाई इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडा बढाएका छन्। वायु सेवा सञ्चालक संघले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै आन्तरिकतर्फ न्यूनतम ९० रुपैयाँदेखि अधिकतम ४४५ रुपैयाँसम्मले भाडा वृद्धि गरेको हो। सबैभन्दा बढी काठमाण्डौ–धनगढीको भाडा ४४५ रुपैयाँले बढेको छ भने सबैभन्दा कम काठमाण्डौ–सिमरा ९० रुपैयाँले बढेको...
प्रधानमन्त्रीले गरे गौतमबुद्ध विमानस्थलको उद्घाटन
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सोमबार बिहान औपचारिक उद्घाटन गरेका छन्। कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले पहिलो व्यावसायिक उडानसहित अवतरण गरेपछि यो विमानस्थलको प्रधानमन्त्री देउवाले औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्। जजिरा एयरलाइन्सले अवतरण गर्नुअघि नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज...
नेपाल एयरलाइन्सले भोलि काठमाण्डौ–भैरहवा उडान गर्ने
काठमाण्डौ । भोलि जेठ २ गते भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिँदैछ। यो दिन नेपाल एयरलाइन्सले काठमाण्डौ–भैरहवा–काठमाण्डौ उडान भर्ने भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको ए३२० न्यारोबडी विमानले काठमाण्डौबाट बिहान ६ बजे भैरहवाका लागि उडान भर्नेछ। यो विमान भैरहवाबाट बिहान ८ बजे नै काठमाण्डौका लागि उड्नेछ। यसअघि...
वैशाख ३० मा आन्तरिक उडान नहुने
काठमाण्डौ । स्थानीय तह निर्वाचनका दिन वैशाख ३० गते आन्तरिक उडान नहुने भएको छ। वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले आज एक सूचना जारी गर्दै वैशाख ३० गते सबै आन्तरिक उडान बन्द हुने जनाएको हो। मानवीय उद्धार, सहायता उडान एवं सरकारको निर्देशनमा हुने उडानबाहेकका अन्य सबै नियमित आन्तरिक उडान सेवा बन्द रहने सूचनामा जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगको...
भोलिबाट सबै आन्तरिक उडान बन्द गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुको चेतावनी
काठमाण्डौ । वायुसेवा कम्पनीहरुले विरोध गर्दै भोलि शुक्रबारबाट सबै आन्तरिक उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) ले बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको रात्रिकालीन आन्तरिक हवाई उडान सेवाको विरोधमा वायुसेवा कम्पनीहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। वायुसेवा सञ्चालक संघ (एओन) ले बिहीबार एक प्रेस...
आन्तरिक उडान बिहीबारदेखि १८ घन्टा, कस्तो छ एयरलाइन्सहरुको तयारी ?
काठमाण्डौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई चाप व्यवस्थापन गर्न नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक उडानतर्फ उडान समयावधि बढाएर १८ घन्टा पुर्याएको छ। विमानस्थलको एयर ट्राफिक जामलाई ध्यानमा राख्दै बिहीबारदेखि तराईका ६ क्षेत्रीय विमानस्थलमा १८ घन्टा उडान गर्न लागिएको महानिर्देशक इञ्जीनियर प्रदीप...
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा
सिबी अधिकारी/रासस काठमाण्डौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ७४ वर्षपछि मुलुकभित्र अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरहवा (रुपन्देही) मा निर्माण गरिएको बहुप्रतिष्ठित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको...
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घन्टा र आन्तरिक विमानस्थल १८ घन्टा सञ्चालन हुने
काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी जेठ १५ गतेदेखि चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा आउने भएको छ। बढ्दो हवाई उडान चाप व्यवस्थापनका लागि नियामक नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चौबीसै घन्टा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए)सहित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय...
आकस्मिक अवतरणका क्रममा प्लेन भयो दुई टुक्रा (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ। मध्य अमेरिकाको कोस्टा रिका देशमा बिहीबार आकस्मिक अवतरणका क्रममा एउटा विमान दुई टुक्रा भएको छ। कोस्टा रिकाको जुआन शान्टा मारिया अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो घटना भएको हो। डीएचएलको कार्गो विमानमा उडान भर्ने क्रममा केही प्राविधिक समस्या आएको थियो। त्यसपछि जुआन शान्टा मारिया विमानस्थलमा आपतकालीन अवतरण गरिएको थियो। तर,...
खराब मौसमका कारण पोखराबाट हुने हवाई उडान अवरुद्ध
पोखरा । खराब मौसमका कारण पोखराबाट हुने उडानहरु अवरुद्ध भएका छन्। बिहान १०ः४५ बजेदेखि पोखरा विमानस्थलबाट उडानहरु हुन सकिरहेको छैन। जसका कारण पोखराबाट काठमाण्डौ, धनगढी र भैरहवामा हुने उडानहरु अवरुद्ध भएका छन्। गन्तव्यमा पुग्नका लागि पोखरा विमानस्थल पुगेका यात्रुहरु अलपत्र परेका छन्। मौसमको खराबीका कारण कम भिजिबिलिटीले गर्दा...
बक्यौता रकम नतिर्ने ७ वायुसेवा कम्पनीमाथि कारबाहीको चेतावनी
काठमाण्डौ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ७ वायुसेवा कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै ती वायुसेवा कम्पनीमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएको हो। प्राधिकरणले नेकोन एयर, शिवानी एयर, गोरखा एयर, माउन्टेन एयर, कस्मिक एयर, स्काईलाईन एयरवेज र एयर काष्ठमण्डपलाई ३ पटकसम्म पत्राचार...
उडान विस्तारमा आक्रामक बन्दै नेपाल एयरलाइन्स
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले कोभिड–१९ महामारीका कारण उडान स्थगित भएका गन्तव्यमा धमाधम उडान विस्तार गरिरहेको छ। महामारीको जोखिम कम भएसँगै सबैजसो क्षेत्र सहज बनेपछि नेपाल एयरलाइन्सले महामारीअघि उडान सेवा दिइरहेका गन्तव्यमा पुनः उडान सुरु गरेको हो। नेपाल एयरलाइन्सले दुई वर्षको अन्तरालपछि...
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्न ५ वायुसेवा कम्पनी इच्छुक
बुटवल। हालै निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि पाँचवटा कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले उक्त विमानस्थलबाट चाँडोभन्दा चाँडो उडान तथा अवतरणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन...
अमेरिकी हवाई क्षेत्रमा रुसी विमानमाथि प्रतिबन्ध
काठमाण्डौ । अमेरिकाले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा निजी तथा व्यावसायिक सबै रुसी उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। स्टेट अफ युनिअन सम्बोधनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्नो प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको पुष्टि गरेका हुन्। युरोपेली देश तथा क्यानडाले रुसी विमानहरुमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि अमेरिकी निर्णयबाहिर आएको हो। राष्ट्रपति...
रुस–युक्रेन युद्धमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विमान क्षतिग्रस्त
काठमाण्डौ । रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ। यही युद्धका क्रममा विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्गो विमान पनि क्षतिग्रस्त बनेको छ। युक्रेनले कीभनजिकैको गोस्टोमेले विमानस्थलमा रुसी गोलाबारीमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो जहाज नराम्ररी क्षतिग्रस्त भएको जनाएको छ। एन्टोनोभ–२२५ म्रिया नामक यो विमान युक्रेनले निर्माण...